Wararka - Waa maxay nalalka high-bay
Waa maxay nalalka high-bay
Sida magacaba ka muuqata.nalalka highbaywaxaa loo isticmaalaa in lagu shido meelo leh saqafyo dhaadheer.Tani waxay badanaa khuseysaa saqafka u dhexeeya 20 cagood ilaa 24 cagood.Nalalka Lowbay, si kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaalaa saqafyada ka hooseeya 20 cagood.
Nalalka Highbay waxay leeyihiin codsiyo badan oo ku saabsan warshado kala duwan, tan waxaa ku jira aqoon-is-weydaarsiyo, khadadka shirarka, warshado.Nalalka Highbay waxa kale oo laga yaabaa in lagu arko goobaha jimicsiga ee madadaalada ee waaweyn.Nalalka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale aad ugu fiican iftiiminta goobaha kaydinta iyo bakhaarada, hoolalka shirarka ee waaweyn.
Iftiinka Highbaywaxay siisaa faa'iido iftiin cad, isku mid ah oo ah waxa ka hooseeya oo leh iftiin aad u yar.Noocyada kala duwan ee muraayadaha waxay qabtaan hawlo nuucyo kala duwan oo iftiin ahnalalka highbay.Miliciyeyaasha aluminiumku waxay u oggolaanayaan iftiinka ka soo baxa qalabka si toos ah hoos ugu qulqulaya dabaqa iyo muraayadaha prismatic waxay dhaliyaan iftiin baahsan oo waxtar u leh iftiiminta khaanadaha iyo walxaha kale ee sarreeya.
Dhowr warshadood iyo tas-hiilaad ayaa loo baahan yahay si ay u isticmaalaan nalka highbay, Kuwa ugu caansan waa:
• Xarumaha degmada sida xarumaha madadaalada ama bulshada.
• Goobaha wax soo saarka.
• Dukaamada waaweyn.
• Dugsiyada, jaamacadaha iyo goobaha jimicsiga.
Noocyo badan oo qalab ah ayaa la isticmaali karaa marka la dejinayo nalalka highbay.Qalabkan waxaa ka mid ah nalalka LED, nalalka fluorescent, nalalka induction iyo nalalka halide biraha.Mid kasta oo ka mid ah qalabka lagu rakibay wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo waxyeellooyin u gaar ah.Tusaale ahaan,Nalalka LED-kaleeyihiin cimri dherer aad u dheer oo tamar hufan, laakiin, waxay u baahan yihiin maalgashi bilow ah oo weyn.Dhanka kale, nalalka dhaqameedku maaha kuwo qaali ah laakiin ma sii raagayaan waqti dheer waxayna isticmaalaan tamar badan.